Tilmaamaha amniga ee smart si aad lacagtaada u ilaaliso - BancaNEO
Tilmaamaha amniga ee caqliga leh si aad lacagtaada u ilaaliso
NEO waxay la shaqaysaa Satchel ruqsad EMI Yurub ah oo uu soo saaray Bangiga Qaranka ee Lithuania, kaas oo hubiya in lacagahaaga la ilaaliyo wakhti kasta.
Barnaamijka la-dagaallanka musuqmaasuqa iyo nidaamka nidaamka
Kuwani waxay ka mid yihiin astaamaha ugu muhiimsan ee amniga ee aan ku hayno meesha. Software-ka, oo ay weheliso nidaamyo gaar ah, ayaa naga caawinaya inaan ogaano oo ka hortagno waxqabad kasta oo khatar ah oo waxyeelayn kara lacagahaaga.
Markaan awoodno xaqiijinta laba-geesoodka ah, waxaan ku darnay lakab dheeri ah oo ilaalin habka xaqiijintaada, taasoo caqabad ku ah dambiilayaasha internetka inay gacmahooda ku helaan xogtaada shaqsiyeed. Xitaa haddii eraygaaga sirta ah la jebiyo, weli kuma filna in la jebiyo BancaNEO xisaabta.
Fur Account Private
Xisaabaadka la kala saaray
Liisankayaga, waxaan ku qasban nahay inaan lacagta macaamiisha ku hayno koonto gaar ah Bangiga Qaranka ee Lithuania. Sidan ayaan uga takhalusi doonnaa wax walwal ah oo aad ka qabtid qaybtaada amniga goobta lacagaha.
3D aamin ah
Qalabkan amniga ee horumarsan ayaa la hawlgeliyaa mar kasta oo aad wax ku iibsato ama aad lacag ku bixiso internetka, laba-hubin haddii ay dhab tahay adiga dhinaca kale ee shaashadda. Waa uun tallaabo kale oo xaqiijin ah oo noo oggolaaneysa inaan si ammaan ah u xaqiijinno macaamilkaaga internetka.
Waxaan diyaarinay siyaasado iyo kontaroolo hubiya in si buuxda loo ilaaliyo xogta isticmaalaha halista ka imaankarta iyadoo loo marayo baahinta xukunka. Waqti kasta oo aad nagula macaamilayso adoo adeegsanaya xarumo dijitaal ah, ama aad sameyneyso nooc kasta oo hawlgal ah, waxaa laga yaabaa inaad hubto in daruurtu ay ilaalinayso amniga.
Fur akoonkaaga gaarka ah
Fur Koontadaada Ganacsiga